Dhawr Xubnood oo ka Tirsanaan Jiray Kooxda Jwxo-shiilada oo ay Xaalad Adagi ku Haysato Dalka Kenya – Rasaasa News
Dhawr Xubnood oo ka Tirsanaan Jiray Kooxda Jwxo-shiilada oo ay Xaalad Adagi ku Haysato Dalka Kenya
May 30, 2009 Jwxo-shiil
Nairobi – Kenya [May 30, 2009] – Wararka naga soo gaadhaya Magaalo madaxda Dalka Kenya ee Nairobi, ayaa sheegaya in ay ku dhibaataysan yihiin dhawr xubnood oo hore uga tirsanaan jiray kooxdii ma liibaanayaalka ee Jwxo-shiilada. Kooxdii Jwxo-shiilada oo iyagu dhibaatooyin badan u gaystay halganka iyo guud ahaan ummada Somalida Ogadeeniya ayaa waxaa ay shacabka Somalida Ogadeeniya ay fahmeen, wax ay yihiin muddo saddex bilood ka hore ah, ka dib kolkii Halgame Dr. Maxamed Sirad Dolal ay ku dileen gudaha Ogadeeniya isaga oo gudanaya waajibaadkiisa halgan.
Intaa wixii ka dambaysay ayey shacabka Somalida Ogadeeniya isweydiiyeen waxa keenay in rag Jabhada oo la dagaalamay Itobiya loo dilay, hadiiba uu halgan xaq ah yahay arimaha ay ku jiraan Jwxo-shiiladu, waxaana soo baxday in kooxdan Jwxo-shiiladu ay yihiin halgan dumisyo dabo dhilif u ah xukuumada Itobiya, baabi,iyeen halgamayaal badan iyo shacabka si aan la dareemaynin.
Kooxdani waxay muddo dheer ku qadhaabsanayeen erayga daboqoodhi oo ruux alaale ruuxi ay is yidhaahdaan wuu idin fahmayba in ay shacabka ku diraan oo ay yidhaahdaan wuxuu la shaqeeyaa safaarada Itobiya, halgankuu duminayaa iyo erayo xun xun oo sumcad dil, balse arintu waxay ahayd “qumayo inta aadan qumayo odhanin ayey qumayo ku tidhaahdaa”. Jwaxo-shiiladu waxaa ay ahaayeen kuwo si,aan la fahmaynin ula shaqeeya gumaysiga Itobiya xitaa waxaa fahmi waayey xukuumada Eritariya oo ay in muddo ah ku hoos noolaayeen.
Wixii xiligaasi ka dameeyey shacabka Somalida Ogadeeniya waxay ku bilaabeen dagaal af iyo adin ah, waxaana la waayey dambiilihii ugu waynaa Dambiile MR. Jwxo-shiil oo aan maalinkan maanta ah ayna jirin meel lagu sheegi karo. Waxaa iyaguna noqday dab dhagax lagu dhuftay xubnihii kooxda Jwxo-shiilada, oo intoodabadani ay ku dhuumaalaystaan dalalka reer galbeedka.
Hadaba, sida ay wararku sheegayaan qaar ka mid ah xubnahan oo joogay dalka Kenya ayaa waxay bulshada Inteedii kale ka noqdeen Tuke cambaar leh, waxayana ku dhuumaalaystaan xaafado ay qaraabo dhaw yihiin iyaga oo uu aad u liidato xaaladooda dhaqaale. Waxay wararku sheegayaan in xubnahani ay kolkii hore xoogaan dhaqaale marmar ka heli jireen Safaarada Maraykanka oo iyagu aad ugu bixisay lacag basaasiinta ay ugu yeedheen argagixiso la dirirka geeska afrika. Lacagahaa oo Jwxo-shiil loogu dhiibi jiray ayaa hhada istaagay maadaama isagii la la,a yahay.
Qaar badan oo iyaga ah ayaa waxaa la sheegayaa in ay jecel yihiin in ay u tahriibaan xaga dalka Koonfur Afrika, hadiiba ay helaan kharajka jid marka.
Ilaahay Quraankiisa waxaa uu ku yidhi, Munaafiqiintu Dabaqa ugu hooseeya ee Naarta ayey lee yihiin “Inal munaafiqiina fiidarkil asfali mina naari”
History Repeats itself: Ogaden Rebel Says Warriors Obey His Orders Only